Weebụsaịtị kacha mma iji belata vidiyo n'ịntanetị n'efu | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Ndị na-egwu egwuregwu, software
Ọbịbịa nke smartphones na ahịa na ka teknụzụ enweela ọganihu, ụzọ anyị si ejide ihe ncheta kachasị mma nke ụbọchị anyị taa agbanweela, dna-ahapu kompi igwe eji ede ihe maka iji ama ama ma maka ịse foto na vidiyo. Kwa afọ, igwefoto nke smartphones na-enye anyị atụmatụ ka mma, yabụ na ọ nwekwaghị ezi uche ịga n'ihu na-eji kọmpụta kọmpat ma ọ gwụla ma ọ na-enye anyị atụmatụ anyị na-adịghị ahụ ugbu a na smartphones.
Thebawanye mkpebi nke igwefoto yiri ka ọ bụkwaghị ihe dị mkpa maka ndị nrụpụta, ndị na-elekwasị anya n'ịbawanye ogo vidiyo. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkekọrịta vidiyo, dabere na oge ha, enwere ike ịmanye anyị ịkpụcha ha. Maka nke a, na wentanetị anyị nwere ike ịchọta ọrụ ntanetị dị iche iche nke na-enye anyị ohere ịme ya ngwa ngwa na ngwa ngwa. Lee, anyị ga-egosi gị otu esi egbutu vidiyo na ntanetị na-enweghị ịwụnye ngwa ọ bụla na kọmputa anyị.
Dịka ọ na-adị n'ụdị ụdị ọrụ ịntanetị, n'ọtụtụ oge ọ dị mkpa itinye Adobe Flash na kọmputa anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike ịnweta ọrụ ndị a. Naanị weebụsaịtị ebe anyị kwesịrị budata ụdị nke Flash kacha ọhụrụ bụ nke onye nrụpụta ya, Adobe. Ikwesighi ịwụnye ụdị Flash, ma ọ dịkarịa ala melite ibe weebụ nke na-atụ aro ka anyị mee nke a na-ekwu na ọ bụrụla ochie. Flash na-ejikọ usoro mmelite ahụ ga-agwa anyị mgbe ọ dị mkpa iji wụnye mmelite ọhụrụ nke ngwanrọ a.
1 Web bee Video Online
3 Igbe vidiyo
5 Onye Ike
Web bee Video Online
Bee vidiyo na ntanetị na-enye anyị ngwa ọrụ ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ibelata vidiyo anyị ka ọ dịrị mfe ịkekọrịta ya, kamakwa na-enye anyị ohere gbanwee ya site na 90 ruo 270 degrees, ewepụtụ otu akụkụ nke vidiyo na-eme ka video ihe ọzọ a ma ama, ewepụtụ online videos si a URL ma ọ bụ site na Google Drive na ọ bụ dakọtara na kasị formats ugbu a na ahịa. Oke kacha file size na-enye anyị ohere bee esịmde 500 MB, a ezi uche ego dabere na àgwà na nke anyị dere video.
Ozugbo anyị bulite vidiyo ma mee mgbanwe niile nke ngwa ahụ nyere anyị, anyị nwere ike họrọ ogo na usoro nke anyị chọrọ iji budata ya, ka anyị wee nwee ike iji Cut Video Online iji tọghata vidiyo anyị na usoro ndị ọzọ na-enweghị ịwụnye ngwa ọ bụla nke atọ na kọmputa anyị. N'ezie, oge ọrụ a ga-adabere na ọsọ njikọ anyị butere.
Gbanwee Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịbe vidiyo anyị kacha amasị anyị, mana ọ bụkwa ọrụ na-enyekwa anyị ohere ịmegharị ya, belata ebe kachasị amasị vidiyo ahụ, na mgbakwunye na ikwe ka anyị kewaa ya na vidiyo abụọ ma ọ bụ karịa . Nsogbu bụ na usoro ndị ahụ niile anyị ga - eme onwe ya ma ọ bụghị ọnụ dịka anyị nwere ike ime na ọrụ ahụ na ngalaba gara aga. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere bulite faịlụ ma bepụ ya, mana ọ na-enye anyị ohere ịbanye URL ebe vidiyo anyị chọrọ ịkpụ dị ma budata ya. Ọrụ a ọ chọghị Adobe Flash rụọ ọrụ.
Igbe vidiyo bụ ihe ọzọ nke kasị mma online ọrụ na anyị nwere ike ịhụ na internet mgbe ọ na-abịa ịcha anyị videos enweghị nwere ibudata ụdị ọ bụla nke ngwa. Ọrụ a na-enye ohere ka anyị bulite vidiyo nke ihe ruru 600 MB na usoro ndị a: 3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, MPG, RM, VOB, WMV. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere wepụ ọdịyo ma gbakwunye nke ọhụrụ, gbakwunye ndepụta okwu, jide vidiyo ahụ, gbanwee usoro codec, tinye akara mmiri, mkpebi ahụ ma jiri ezi uche belata akụkụ ọ bụla nke vidiyo ịhapụ naanị nke nwere mmasị anyị kacha.
The online video nchịkọta akụkọ nke Kioza, ọrụ na-enyekwa anyị ọrụ iji dezie foto na ntanetị, ọ na-enyekwa anyị ohere ịbe vidiyo ndị ahụ ịhapụ naanị akụkụ kachasị mkpa nke vidiyo ahụ, mana na-enyekwa anyị ohere tinye ntụgharị n'ụdị a akwụkwọ, ngagharị, blinds ... ma ọ bụrụ na anyị nwere ihe karịrị otu video na nchịkọta akụkọ, anyị nwekwara ike tinye mmetụta dị ka ezimezi oku, bokeh, swirl, glitters ...
Anyị nwekwara ike tinye ederede, ihe eserese na egwu. Na mgbakwunye, ma ọ bụrụ na ezughi, anyị nwekwara ike ikpokọta foto na vidiyo iji mepụta vidiyo dị egwu. Ọrụ nke a online video edezi ọrụ dị nnọọ mfe, ebe ọ bụ na ịgbakwunye ọ bụla nke mmetụta anyị dị nwere ịdọrọ ha ka ha akụkụ nke video ebe anyị chọrọ na-agụnye ya.
Onye Ike na-enye anyị nchịkọta akụkọ vidiyo dị na ntanetị nke anyị nwere ike belata akụkụ nke vidiyo anyị enweghị mmasị na ya. The formats dakọtara na .wmv, mp4, mpg, avi ... Ọrụ a Ọ na-enye anyị mmachi nke 50 MB mgbe ị na-egbutu vidiyo, ya mere, ọ dị mma maka obere vidiyo ma ọ bụrụ na anyị ebughị n'obi ịgbakwunye mmetụta ọ bụla ọzọ, gbanwee ya ma ọ bụ belata otu mpaghara vidiyo dị na ajụjụ. Wincreator achọghị Adobe Flash iji belata vidiyo ndị kachasị amasị anyị.
Magisto na-enye anyị dị iche iche video nchịkọta akụkọ karịa na mbụ, ebe ọ na-enye anyị ohere dezie vidiyo anyị na usoro atọ. Nke mbu anyi aghaghi ịhọrọ vidiyo site na draịvụ ike anyị ma ọ bụ site na akaụntụ nchekwa anyị na Google Drive. Na nzọụkwụ ọzọ anyị nwere ike belata mpaghara kachasị mma nke vidiyo ma gbakwunye isiokwu kachasị dabara na ihe anyị na-achọ. Na nke atọ na nke ikpeazụ, anyị ga-ahọrọ ụda ụda nke ga-eso vidiyo anyị. N'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, iji jiri Magisto mee ihe, anyị ga-edebanye aha, ma ọ bụ jiri akaụntụ Facebook anyị ma ọ bụ site na akaụntụ Gmail anyị. Ọ dịghị achọ adoble Flash na-arụ ọrụ.
con Ebube ọbụghị naanị na anyị nwere ike bulite vidiyo ọ bụla ma dezie ya, mana anyị nwekwara ike dekọọ site na kamera kamera anyị. Banyere nhọrọ ndị ClipChamp nyere, anyị na-achọta ohere nke ịkụ vidiyo, ịkụcha mpaghara nke ihuenyo ahụ, ịtụgharị vidiyo ahụ, tụgharịa ya ma ọ bụ dozie ogo nchapụta na ọkwa dị iche. Dị ka Magisto, iji jiri ọrụ a, anyị ga-edebanye aha site na akaụntụ Facebook ma ọ bụ Gmail anyị, ihe nwere ike ịbelata ihe karịrị otu iji nwee ike iji ọrụ a. Ọ chọghịkwa Adobe Flash Player.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-egwu egwuregwu » Bee vidiyo vidiyo
Ahụmịhe egwuregwu egwuregwu Madrid mechiri karịa ndị ọbịa 100.000
Kinde Oasis ga-adaba na Audible na mmelite na-esote